(၂၀၀၈ ကို ကြိုဆိုလျက်)
၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁
အင်း မောင်ရန်က ရေးဖို့ လာ Tag သွားတဲ့အတွက် မရေးရင်လည်း မကောင်း၊ ရေးပြန်ရင်လည်း မရေးတတ် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ များများရေးရမလား နည်းနည်းရေးရမလား ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေက မနည်းတော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ နိဒါန်း မစ၊ စာကိုယ်မရေး၊ နိဂုံးဘဲ ရေးလိုက်တော့မယ်နော်။ ကောင်းတယ်မလား။ လူလောကကို စပြီရောက်ပြီးသကာလ လူမှန်းသိတတ်စလို့ဘဲ ပြောရတော့မှာပေါ့။ ဒီလိုနေ့ရက်တွေဆို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ အဲလောက်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ နည်းနည်းကြီးလာတော့ ယမင်းတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူငယ်တွေစုပြီး လူကြီးတွေကို ဒုတ်ခပေး အဲ အကူအညီတောင်းတာပါ။ အတင်း အေးဓားပြတိုက် ပိုက်ဆံတောင်း၊ ပြီးရင် လမ်းလယ်ကောင်မှာ မီးဖို ဖို အမြဲတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု လုပ်စားကြတယ်။ ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေလုပ်တော့ ကိုယ်က ချက်ပြီးရင် စားချင်တာပေါ့။ သူတို့က အခု မစားရသေးဘူး။ New year အော်ပြီးမှ စားရမှာလို့ပြောတာနဲ့ ကလေးတွေစုပြီး happy new year လို့ ကုန်းအော်တော့တာပါပဲ။ ဒါကို လူကြီးတွေက ဟဲ့ ည ၁၂ နာရီထိုးမှ အော်ရမှာ ခု မအော်ရသေးဘူးလို့ပြောတော့ ကိုယ်တွေက အိပ်ချင်နေတာကိုး။ စားပြီးအိပ်မယ်ဆိုပြီး အော်တာပေါ့။ နောက်ပိုင်း အလုပ်ဝင်တော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မပျော်ရတော့ဘူး။ ရုံးက ပွဲလုပ်တော့ အဲဒီပွဲမှာ တစ်ညလုံး အိပ်ငိုက် အဲ မှားလို့ ပျော်ရတော့တာပေါ့။ ဟိုးအရင် ရုံးတုန်းကတော့ အင်းယားနားက ခြံထဲမှာ လုပ်တယ်။ ပွဲမလုပ်ချင် အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ် လျှောက်သွားလိုက်နဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲ ပွဲကို မသွားခင် ရုံးမှာ လူစုပြီး ATT ကစားကွင်းမှာ သွားဆော့ပြီးမှ ပါတီပွဲကို သွားတာ။ ပြီးမှ ပွဲမှာ တစ်ညလုံး မဲနှိုက်၊ သီချင်းဆို၊ မီးပုံပွဲနဲ့ ၁၂ နာရီထိုးခါနီးကျရင် အားလုံး မတ်တတ်ရပ်ပြီး နာရီသံ နားထောင်ပြီး အော်ရတာ အပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကလည်း တွေ့တဲ့သူတိုင်း လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ကြသေးတယ်။ အင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ရှိုးပွဲကြည့်ပြီးတော့ ကစားသေးတယ်။ ကစားတာက ဘာမှမဟုတ်ဘုး။ ဟိုဘက်ဒီဘက် အနိမ့်အမြင့်ကို စီးတာလေ။ ပြောရဦးမယ်။ ယမင်းနဲ့ စီးတဲ့သူက ၀တယ်လေ။ သူက ထိုင်လိုက်တော့ ယမင်းဘက်က မိုးပေါ်ထောင်သွားရော ဒါနဲ့ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာဖိပေးမှ စီးလို့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဟဲဟဲ ဒါကို သူငယ်ချင်းက ဒီပြင်ဟာ ဆော့တဲ့ သူ မဖိပေးတော့ဘူးတဲ့။ လာဖိပေးတော့ သူက မဆော့ရဘူးတဲ့။ ဒါန်းစီးပါလားတဲ့။ ဒါနဲ့ လွှဲပေးမလား မေးလိုက်တာပေါ့။ လွှဲပေးမှ စီးလို့ကောင်းတာလေနော်။ သူက ဘာမှမလွတ်ပါလားဆိုပြီး လွှဲံပေးရှာပါတယ်။ ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းရထားတာ နင်တို့ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်မလား။ ၁၀ နာရီထိုးလည်းကျရော ပိတ်ပါလေရော။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာစုပြီး စားကြသောက်ကြနဲ့ တစ်ညလုံး မအိပ်ကြေးလုပ်ကြတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ အကြံပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုရင်း နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကုးတဲ့နေ့မှစ၍ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး Óဏ်ပညာများ ဒီ့ထက် ဒီ့ထက် တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ယမင်းဆီ အမြဲလာလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
(မောင်လေး ရန်ရေ... ရင်ထဲရှိတာတွေ အကုန်ချရေးရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အနှစ်တွေဘဲ ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီနော်။ ခုလို ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ တို့ ဘလောဂ့်မောင်နှမတွေ ရေစက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မိပါတယ်။)
ထပ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ အကိုသင်္ကြန်၊ မောင်လေး နေဘုန်းလတ်၊ မောင်သင်ကာ၊ ကိုဝေ၊ မောင်လေးမျှားပြာ၊ ညီမလေး သိုးမလေး၊ ညီမလေး မိုးချစ်သူတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ သတင်းကောင်းလေးကို မတိမ်းမစောင်းဘဲ ဘိန်းမောင်းတီးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှ စပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့ထိ
မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ
စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ကျင်းပလျက်ရှိပါကြောင်း
လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာအရှိန်အ၀ါက တာသွားလှတယ်။ အိုင်တီရဲ့သြဇာဟာ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းကိုလည်း ရိုက်ခတ်တယ်။ မိသားစုအလိုက်၊လုပ်ငန်းတွေ၊ အလုပ်သမားစွမ်းအားစုတွေ နောက်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်လုံးကိုလည်း ရိုက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာဟာလူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပေါ်ကျတော့ တူညီမှု မရှိပြန်ဘူး။ အင်းပြောရရင် အိုင်တီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်က ပညာဥာဏ်အဆင့်မြင့်သူက ပညာဥာဏ်အဆင့်နိမ့်သူထက် ပိုပြီး ခံစားရနိုင်တယ်လေ။ ဒီလိုဘဲ ပညာကွဲခြားသွားတာနဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ၀င်ငွေအနည်းအများက ကွဲပြားခြားနားသွားစေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ သူများ ပြောလို့သာ အိုင်တီရတယ် အိုင်တီဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါဟာ ပြန်စဉ်းစားရမဲ့အချက်ပဲနော်။ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ(အိုင်တီ) ဆိုသည်မှာ အင်းအလွယ်ဆုံး ပြောရရင် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးချခြင်းကို ခေါ်ဆိုတာပဲ။ တစ်နည်းပြောရရင် အိုင်တီပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်အားတွေကို သက်သာစေပြီး တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာကိုမြန်ဆန်ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုမြန်ဆန်လာတာကို တွေ့ရှိရတယ်။ ဒီလိုဘဲ အိုင်တီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့လို အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသားများနဲ့ တန်းတူ အလုပ်လုပ်ဆောင်လာနိုင်သလို ၀င်ငွေလစာဟာလည်း တန်းတူနည်းပါး ရရှိလာခဲ့ပြီလေ။ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ အိုင်တီခေတ်လို့ ဆိုရတော့မှာပေါ့။ ခုခေတ်အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး မျက်စိဖွင့်နားဖွင့် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေရပြီလေ။ ကျွန်မကရော အိုင်တီဆိုတာ နားလည်ပြီလား။ အိုင်တီပိုင်းကိုလေ့လာရင်ကော မတိုးတက်နိုင်ဖူးလား။ ကျွန်မလို နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲ အတွေးတွေ ၀င်လာခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ဒါဟာ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ အိုင်တီကြောင့်ပေါ့။ ကျွန်မလည်း ဒီတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲလူတွေထဲမှာကြိုးစားရင် ပါလာနိုင်တော့မှာပေါ့နော်။ သူများတွေ ရှေ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက နောက်ချန်နေရစ်ရရမလား။ ငါကော ကြိုးစားရင် မဖြစ်နိုင်ဖူးလား။ ခုမှ စတင်မဲ့လမ်းအတွက် တစ်ခါတလေ အားငယ်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ စမ်းတ၀ါးဝါးလျှောက်နေတဲ့လမ်းမှာ ငါဟာ လမ်းဆုံးကို လျှောက်နိုင်ပါ့မလား။ ငါ့လို ဘာပညာဘာအစွမ်းအစမှ မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အိုင်တီနဲ့နီးလာမလား။ ဝေးနေသေးလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ရင်း အိုင်တီလောကကြီး အမြဲတည်တံ့တိုးတက်အောင်မြင်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
ငါလေ တစ်နေ့မှ မေ့မရခဲ့ပါ
တစ်ခါတစ်ရံ မတော်တဆ Caps Lock ကို ထိမိကာ ပွင့်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Num Lock ကီးကို ပိတ်မိရင်လည်း Keypad ကို သုံးလို့ မရတတ်ပါ။ ထိုသို့ အမှားများ ပြုလုပ်မိပါက အရေးကြီးသော အလုပ်လုပ်မည်ဆိုရင် နှောင့်နှေးစေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှားပြုလုပ်မိပါက အသံနှင့် သတိပေးခြင်း သို့မဟုတ် မော်နီတာတွင် အချက်ပြခြင်းများ ပြုရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သိပြိးသားလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ယမင်း သိသလောက်ကို ပြောပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယ ယမင်ခင် ကကြိုးဆင်
လောကတစ်ခွင် ဘွု ၃၁
ယ ယမင်းခင် ကြိဲုးဆင်
ရ ကောက် ရထားကြီး ပျြော်ပျော်စီးနေပြီ။
တော်သေးတယ် ပြီးသွားလို့ ဟွန်း...
ယမင်းကို အကူအညီတောင်းလို့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု လက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။
ယမင်းရဲ့ရွှေမြန်မာကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်..... အ၀သာ စားသွားနော်...
ဘွားဘွားရယ် မြေးတို့နဲ့ ခွဲခွာသွားခဲ့တာ ၁၁.၁၁.၂၀၀၇ နေ့ ညနေ ၄း၁၀ မိနစ်ကနေ ဒီနေ့ ဆို တစ်လပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။ အချိန်တွေဟာ မြန်ဆန်လိုက်တာနော်။ ဘွားကို ဒီနေ့ထိ မြေးလေ မေ့မရခဲ့သေးပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြေးတွေကို လိမ်မာအောင်၊ ယဉ်ကျေးအောင်၊ လူတွေကို တတ်နိုင်သရွေ့သည်းခံနိုင်အောင် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့လို့ မြေးလေ လူတွေအပေါ် နားလည်ပေါင်းများစွာနဲ့ နေလာခဲ့ရတာ ဘွားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်ပါနော်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ်အမြဲတမ်းကောင်းဖို့ လမ်းပြခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဟာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘွားရဲ့အေးရိပ်ဟာ မြေးတို့အတွက် အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ဘွား သွားတဲ့လမ်းကို ဆက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်ထားခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်းခွဲခွာခဲ့တဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ မဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘွားရယ် ယမင်းလေ ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဘွားအတွက် ရင်ထဲက စကားတွေကို ကဗျာအဖြစ် သွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘွား ကောင်းရာဘုံဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုတာ ယမင်းသိထားပါတယ်။
ယမင်းရဲ့အတွေးထဲမှာ ခဏခဏ တွေ့နေရတာ
ယမင်း သွားလေရာ ရောက်လေရာမှာ
ဘွားရဲ့မြစ်တာက ယမင်းအပေါ်မှာ ကြီးမားခဲ့လေတော့
ဘွားက ယမင်းကို နားလည်ပြုံးလေးပြုံးလို့
1. If you've any task to do,
2. If you've anything to say,
3. If you've anything to love,
Asablessing from above,
4. If you've anything to give,
That anothers' joy may live,
ပျော်ရွှင် အေးချမ်းပြီး လိုတာ မှန်သမျှ ရရှိနိုင်ကြပါစေနော်....
လှလားဟင်... လျှောက်လုပ်ကြည့်ထားတာ သိလား။ ဘာမှလည်း ဟုတ်ဝူး။
အဲဒီဘ၀ ငါ ရချင်တယ်။
ဘယ်သူမှ မသုံးတဲ့ လမ်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဆွေးနေတဲ့ ၀ါးပဲ ဖြစ်မယ်။
ခိုင်မြဲတဲ့ ငါ ဖြစ်ချင်တယ်....
ဘ၀ခရီးကြမ်း ငါ ဖြတ်သန်း
ယမင်းတို့အားလုံးဟာ သံသရာ ခရီးသည်ပါနော်။ မွေးလာပြီးကတည်းက အချိန်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတယ်။ ဒုက သုက တွေအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြရတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု ၀မ်းနည်းမှုတွေ ကြုံလာခဲ့ရတယ်။ ခုချိန်မှာ ကလေးဘ၀ဆိုတာကိုလည်း ပြန်မရရှိတော့ဘူး။ ဟန်ဆောင်မှု လောကကြီးကို ဖြတ်သန်းနေရပြီ။ ခရီးကို ဘယ်ထိသွားရမယ်။ ဘယ်လောက်သွားရမယ်ဆိုတာ အချိန်က တန်ဖိုးဖြတ်ပေးနေသလိုပဲ ခံစားနေရတယ်။ ယမင်းဆို ခု ဘ၀ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကို ရောက်ရှိလဲ့ပြီပေါ့။ ခုချိန်ထိ ဘာမှ ဖြစ်မလာသေးဘူးလေ။ ခုတော့ တော်တော်ကို စိတ်ဓာတ်ကျနေတယ်။ ဒီလိုပုံစံနဲ့ သေမသွားချင်သေးဘူး။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကို ရောက်အောင်သွားချင်သေးတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရေ.... ဖြစ်နိုင်ရင် ခရီးလမ်းပြပါဦး...
ဘသရဲ့ ခါးသီးမှုပမာ ငါတို့ ဝေးခဲ့ကြပြီဆိုပါတော့
ငါလေ လူခြေတိတ်တဲ့ ထောင့်လေး တစ်နေရာမှာ
ငါ တစ်ယောက်ထဲ ကြေကွဲနေပါ့မယ်
ဟော ဒီနေ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်မှာ ယမင်းကတော့ ထူးထူးခြားခြား အလုပ်ဆင်းရပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့မှာ ဆေးပင်အပေါင်းတို့ကို စောင့်တဲ့နတ်တို့ဟာ မဲဇလီပင်စောင့်နတ်မင်းအား လာရောက်ခစားကြတာကို အစွဲပြုပြီး မဲဇလီပင်သည် ဆေးပေါင်းခသည့် အပင်ဟု ယူဆကြပါတော့တယ်။ အနာမျိုး ၉၆ ပါး ကင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ မဲဇလီဖူးသုတ်စားကြပါသေးတယ်။ သင်ကော မစားချင်ဖူးလား။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရတာ ယမင်းတော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာ့ ဓလေ့စရိုက်များ အများကြီး လတိုင်း ကျန်ရှိနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ ယမင်း သိတာလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်...
အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သဘောတူညီရရှိပြီ အထိမ်းအမှတ်၊ အတူနေဖို့၊ ရိုးသားမှုနဲ့ ကျေးဇူးရှိမှုတို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးတတ်ရင် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
မြင့်မြတ်မှု၊ မြင့်မြတ်တဲ့အချစ်၊ သမားရိုးကျတွယ်တာမှု၊ မြင်မြင်ချင်း ချစ်တဲ့အချစ်လို့ ဆိုလိုတဲ့ ပန်းဖြစ်ပါတယ်။
Agavanceae မိသားစုနှင့် Agave မျိုးစုပင် အပင်မျိုးများ ဖြစ်ကြပြီးး ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်အဖြစ် လူသိများကြသည်။ သစ်ရည် သို့မဟုတ် အစေးသည် အရေပြားကို တစ်ပတ်မျှ ကြာသည်အထိ လောင်ကျွမ်းစေပ်ါသည်။
ပုံရိပ်စစ်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် အလှစစ်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။
သူလည်း ရရှိ၊ ကိုယ်လည်းသိ
အဘွားဆုံးသွားတဲ့အတွက် အစစအရာရာ ကူညီခဲ့ကြသော ချစ်သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လာရောက်အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ သိုးမလေးနဲ့ မြည်းကလေးကိုလည်း အစ်မရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းမေးကြသော ဘလောဂ့်မောင်နှမများအားလုံးကိုလည်း အမြဲအမှတ်ရနေမိမှာပါနော်။ ၀မ်းလည်းသာမိတယ်။ ယမင်းမှာ ဒီလို မောင်နှမတွေ မိတ်ဆွေတွေ အပေါင်းအသင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ယမင်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ပြီးတော့ မောင်လေး မျှားပြာရယ်၊ မောင်လေးအေးချမ်းတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တကူးတက သတင်းမေးဖော်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းလည်းသာမိတယ်။
၂၀၀၇ ခု ၁၁ လပိုင်းမှာ ယမင်းဘလောဂ့်လုပ်တဲ့သက်တမ်း ၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလေ... ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ယမင်းပြောမှားဆိုမှားရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်...
နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာ လူဖျက်၍ မရနိုင်
တစ်ရပ်တစ်ကျေးမှာနေတဲ့ မောင်နဲ့ မေ တစ်နေရာမှာ တွေ့ဆုံပြီး အိမ်ထောင်ကျကြစေလို့ ဖူုးစာရေးနတ်မင်းက သူတို့ နဖူးမှာ မမြင်ရတဲ့ ရွှေမင်နဲ့ စာရေးလိုက်တယ်။ နဖူးစာပါသူချင်း ဆုံဆည်းပေါင်းဖက်မိကြတယ်။ ဒီအယူအဆက ကျွန်မတို့ မြန်မာနဲ့တူတ်။ မောင်ရဲ့နဖူးမှာ မေ့ရဲ့အမည်ရေးထိုးပေးလိုက်တယ်။ မေရဲ့နဖူးမှာ မောင့်ရဲ့အမည်ရေးထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ဖူးစာရေးနတ် ဖန်တီးပေးလိုက်လို့ နဖူးစာပါလို့ ပေါင်းဖော်မိကြတယ်။ ဖူးစာရေးနတ်က ရေးပေးလိုက်လို့ လူဝင်ဖျက်လို့ မရပါဘူးတဲ့။ ဆိုရိုးစကားကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ကော ကိုယ့်နဖူး ကိုယ်မှန်နဲ့ ကြည့်ကြဦးနော်။ အမည်မှားမှာစိုးလို့ပါ....
ကတော့ခရုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကတော့ခရုကောင်လေးများသည် လှပ၍ ကောက်ယူသိမ်းချင်စဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြု ဆင်ခြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ဖမ်းလိုက်သည်နှင့် မှီလောက်သောနေရာ အကွာအဝေးသို့ရောက်လျှင် အဆ်ိပ်များကို ပန်းထုတ်တတ်ပါတယ်။ ထိမိသော ဒဏ်ရာဟာ အလွန်နာကျင်ပြီး အခန့်မသင့်လျှင် အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။
ဆီဗုံးသို့ မိုက်ရိုင်းညစ်ညမ်းစွာ လာရောက်ဆဲရေးသွားသူအတွက် မှာတမ်း
ငါတို့သည် ငါတို့ တွေးကြံသည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်ရသည်။
ငါတို့၏စိတ်ကပင် ငါတို့ကို ဦးဆောင်လေသည်။
ငါတို့၏စိတ်ဖြင့်ပင် လောကကို ပြုပြင်စီရင်၏။
ဒုက္ခသည် သင်၏နောက်သို့ လိုက်လာလိမ့်မည်။
လှည်းကိုဆွဲသော နွား၏နောက် လှည်းဘီးက
မကောင်းတာ လုပ်လျှင် မကောင်းတာဖြစ်မည်။
ကြီးမားစွာ ဆင်းရဲပူပန်ရမည်သာ ဖြစ်ပေတော့မည်။
အကယ်လို့ လူတစ်ဦးသည် စိတ်ဓာတ်ညစ်ညမ်းသူ ဖြစ်လျှင် မိုက်ရိုင်းစော်ကားသူဖြစ်နေလျှင်
သင် သတိပြုပြီး ဆင်ခြင်လော့
လုပ်ရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့ ငါ
ဒါကိုမှ နှစ်ခြိုက်ကျေနပ်နေတဲ့ ငါ
ဘယ်တုန်းကမှ တည့်တည့်သွားတာ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူးလေ
ဒါ ကျွန်မ သိကျွမ်းတဲ့
ဒါပေမဲ့ ဒီလမ်းက ကျွန်မအိမ်ပဲမို့
ဒီနေ့ သတင်းကောင်းလေးကို မတိမ်းမစောင်းဘဲ ဘိန်းမောင်...
Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock ကီးများကို မှားယွ...
ရနံ့သင်းတဲ့ ပန်းခရေ ပန်ပါတဲ့ ပန်ပါ မြောက်ဘက်အိမ် ...
ယမင်းကို အကူအညီတောင်းလို့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု လက်ခံပေးလိ...
ယမင်းရဲ့ရွှေမြန်မာကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်......
When wealth is lost, Nothing is lost. When health ...
1. If you've any task to do, Let me whisper, fr...
ပျော်ရွှင် အေးချမ်းပြီး လိုတာ မှန်သမျှ ရရှိနိုင်ကြပ...
လှလားဟင်... လျှောက်လုပ်ကြည့်ထားတာ သိလား။ ဘာမှလည်း...
ဖြစ်ချင်ရာ အကွေ့အကောက်၊ ဖြောင့်တန်း လျှောပြေ မတ်ေ...
ဘသရဲ့ ခါးသီးမှုပမာ ငါတို့ ဝေးခဲ့ကြပြီဆိုပါတော့ မင်း...
ချစ်စရာ့ ငါတို့ မြန်မာ တန်ဆောင်မုန်းလဟာ မြန်မာလမျ...
Peach rose, the elegant flower to wish someone ...
ခရမ်းရောင်နှင်းဆီပန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Nobility, cour...
Agavanceae မိသားစုနှင့် Agave မျိုးစုပင် အပင်မျ...
ပုံရိပ်စစ်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် အလှစစ်ကို ထပ်မံတွေ့...
အဘွားဆုံးသွားတဲ့အတွက် အစစအရာရာ ကူညီခဲ့ကြသော ချစ်သူ...
နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာ လူဖျက်၍ မရနိုင် တစ်ရပ်တစ်ကျေးမှာနေ...
လပြည့်ဝန်း လမင်းရယ်... တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ မင်းပျော်...
ဆီဗုံးသို့ မိုက်ရိုင်းညစ်ညမ်းစွာ လာရောက်ဆဲရေးသွားသ...
လမ်းမှန် ငါဟာ... မသွားတတ်တဲ့ ဂဏန်းတစ်ကောင်ပါ။ ဘယ်...
ပုံရိပ်စစ် ကျွန်မဟာ အထီးကျန်လမ်းမှာ လျှောက်နေတယ်....